Trintellix mhedzisiro uye maitiro ekuzvidzivirira | SingleCare - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Zvipfuwo Kambani, Iyo Checkout Nharaunda, Wellness Info Info, Nhau Kambani, Nhau Zvinodhaka Vs. Shamwari Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Dzidzo Yehutano Nharaunda, Kambani Wellness Kambani Nhau, Wellness Dhinda Hutano Dzidzo, Zvipfuwo
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Trintellix mhedzisiro, kudyidzana, uye maitiro ekuzvidzivirira
Trintellix mhedzisiro, kudyidzana, uye maitiro ekuzvidzivirira
Trintellix mhedzisiro | Kurera huremu | Kurega | Inotora nguva yakareba sei mhedzisiro? | Yambiro | Kudyidzana | Maitiro ekudzivirira mhedzisiro
Trintellix (chinhu chinoshanda: vortioxetine) izita rezita remushonga mushonga unorapa kushushikana kukuru kwekushushikana (MDD). Vortioxetine, chinhu chinoshanda muTrintellix, zviyero serotonin muuropi, iyo inogona kubatsira kugadzirisa manzwiro, ndangariro, uyekugadzirisa basamune avo vane kushushikana. Trintellix mushonga unoshanda, asi inogona kunge isiri iyo chaiyo mishonga kune wese munhu nekuda kwemhedzisiro mhedzisiro.
RELATED: Dzidza zvakawanda nezve Trintellix | Tora Trintellix discounts
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yeTrintellix
Mhedzisiro inowanzoitika yeTrintellix ndeiyi:
Zviroto zvisina kujairika
Kukotsira hakuzivikanwe kuve kwakajairika divi mhedzisiro ye vortioxetine. Pane kudaro, vortioxetine inogona kuvandudza maitiro ekurara uye anobatsira kudzikisira kukotsira masikati.
Trintellix uremu hunoshanduka
Zvinodzvinyirira, kunyanya inosarudza serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), inozivikanwa nekubatana nekurema kuwedzera, asi kana vari chaizvo kukonzera kurema kuwedzera kuri kure chokwadi . Trintellix, kune rumwe rutivi, inoita kunge iine mashoma mhedzisiro pahuremu hwemuviri. In zvidzidzo zvekiriniki iyo yakatevera varwere kweinopfuura mwedzi mitanhatu, Trintellix, yaidaidzwa kunzi Brintellix, yakanga isina chakakosha pahuremu hwemuviri. A gare gare kudzidza kwegore , zvakadaro, vakaratidza varwere vakawana avhareji yeimwe (1) pondo vachiri paTrintellix. Vangaita 18% yevadzidzi vakatora Trintellix vakawana kana kurasikirwa ne7% yehuremu hwavo hwepakutanga pakutanga kwekudzidza. Trintellix, saka, ine zvishoma zvainoita pahuremu kupfuura mamwe antidepressants, asi huremu shanduko inogoneka uye inosiyana nemunhu.
Kunge mishonga yese inokanganisa serotonin muuropi, Trintellix haifanire kumiswa pakarepo. Kunyangwe mushonga uyu usiri muropa, iwo muyero unofanirwa kudzikira zvishoma nezvishoma kwemavhiki akati wandei usati wamira kudzivirira zviratidzo zvekumisa. Iwo anowanzozivikanwa Trintellix discontinuation zviratidzo ndeaya:
Discontinuation syndrome zviratidzo zvinogona kutora maawa mashoma kusvika mazuva matatu kuoneka uye inogona kuramba iine vhiki imwe chete kana maviri. Kazhinji, izvi zviratidzo zvinogadzirisa pasina kurapwa muvhiki imwe chete kana mbiri.
Yakakomba mhedzisiro mhedzisiro yeTrintellix
Trintellix inogona kukonzera zvakakomba mhedzisiro inosanganisira:
Kuzviuraya pfungwa uye maitiro
Zvinetso zvekubuda ropa
Mania kana hypomania mune varwere vane bipolar kusagadzikana
Low sodium mazinga
Yakanyanya kugarisana, kusanganisira anaphylaxis kana angioedema
Trintellix inouya neiyo FDA nhema bhokisi inonyevera kuti vana, vachiri kuyaruka, uye vechidiki vari mungozi yekuzviuraya uye maitiro. Kana uchitora Trintellix, varwere vadiki vanofanirwa kutariswa zvakanyanyazviratidzo zvekuzviurayazvakaita se:
Pfungwa kana kutaura pamusoro pekuzviuraya
Mamiriro asina kujairika anochinja
Hasha, kutsamwa, kana hukasha
Kusagadzikana kana kusagadzikana
Nyowani kana kuwedzera kushushikana
Nyowani kana kuwedzera kunetseka
Maitiro ekutora njodzi kana mafungiro ane njodzi
Mishonga yekudzvinyirira senge vortioxetine inogona kukonzera serotonin syndrome, mamiriro anogona kuva nenjodzi anokonzerwa neserotonin yakawandisa muuropi. Rega Trintellix nekukurumidza uye tsvaga kurapwa pazviratidzo zve serotonin syndrome, senge:
Kukurumidza kurova kwemoyo
Yakakwira kana yakaderera BP
Kusvotwa kana kurutsa
Yakaderera ropa sodium
Serotonergic zvinodhaka senge vortioxetine inogona kukonzera SIADH, dambudziko nehormone iyo inodzora kubviswa kwemuviri wemvura nemaelectrolyte kubva mumuviri. SIADH zvakare inogona kukonzera kuwanda kwemunyu (sodium) muropa kudonha, mamiriro anonzi hyponatremia. Low blood sodium inogona kuva yakakomba uye inogona kuva nengozi mamiriro ekurapa, saka tsvaga kurapwa pazviratidzo zvehyponatremia inosanganisira:
Zvakaoma kuisa pfungwa
Angle-kuvhara glaucoma zvinogona kuitika kamwe-kamwe uye kukonzera kurasikirwa kwemaonero kana hupofu mumaawa mashoma kana mazuva. Izvo zvinoitika kana iyo yekudonha gadziriro yeziso iri pakati pe iris uye iyo cornea yakavharwa, zvichikonzera fluid kuti ikurumidze kuunganidzwa mukati meziso. Tarisa zviratidzo zvakadai se:
Akatsvuka kana kuzvimba maziso
Vanhu vane makona matete pakati peiris uye cornea vari panjodzi yekuvandudza glaucoma yekona. Kuongororwa kwemakona madiki kunogona kuitwa panguva yekuongororwa kwemaziso. Makona mapfupi anorapwa kuburikidza nekuvhiya.
Yakareba sei Trintellix mhedzisiro mhedzisiro?
Iwo akanyanya kuwanda Trintellix mhedzisiro ndeechinguvana uye anowanzo kupera mukati memazuva mashoma mushure mekunge mushonga wamiswa. Mhedzisiro yakakomba mhedzisiro, zvisinei, zvinogona kutora nguva yakareba kuti zvigadziriswe. Zviitiko zvakapfava zve serotonin syndrome zvinowanzogadzirisa mukati memazuva maviri kana matatu ekurega mushonga, asi zviitiko zvakakomba zvinoda kurapwa nekukurumidza. Muzviitiko zvinoratidza zviratidzo zveropa yakaderera yerodium, Trintellix inofanira kumiswa uye mupi wezvehutano anofanirwa kutaurwa naye. Mhosva dzakakomba dzeropa rakaderera sosi mazinga angangoda kuchipatara.
Trintellix zvinopesana & yambiro
Trintellix inogona kunge isiri iyo chaiyo mishonga kune wese munhu. Nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vanhu vanogona kutadza kutora mishonga iyi vamwewo vangangwarira vasati vatanga.
Chero ani ane chirwere chakakomba kuTrintellix haafanire kutora mushonga.
Vanhu vanotora monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), kirasi yemishonga inosanganisira mamwe marudzi eanodzvinyirira, maantibayoti, kana madhiragi anorapa chirwere cheParkinson, haazopihwa Trintellix kudzamara varega kutora MAO inhibitors kwemazuva gumi nemana.
Vamwe vanhu havatyori vortioxetine zvakanyanya. Mushonga uyu unoramba uripo kwenguva yakareba mumuviri pakukwirisa, zvichiwedzera njodzi yemhedzisiro. Neraki, vanhu vanogona kuongororwa majini. Varombo metabolizers inongotenderedzwa kune yakanyanya zuva nezuva dhizaini yemamirigiramu gumi (mg).
Trintellix is ​​FDA inogamuchirwa kuti ishandiswe muvakuru vane makore 18 zvichikwira. Trintellix haisati yakatemwa seyakachengeteka kana inoshanda muvana.
Mumakiriniki ekuedzwa , Trintellix yakaratidzirwa kuve inoshanda uye yakachengeteka kune varwere vane makore anodarika makumi matanhatu nemashanu. Hapana gadziridzo yedosi inodiwa.
Kubata uye kuyamwisa
Iko hakuna kukwana kwakaringana kana ruzivo rwunoona kuti Trintellix yakachengeteka kutora panguva yekuzvitakura. Vanhu vane nhumbu kana vanofunga nezvepamuviri vanofanirwa kutsvaga zano rezvechiremba kubva kune wezvehutano vasati vatanga kana kurega Trintellix.
Saizvozvowo, hapana kukwana kwakaringana kana ruzivo rwekuti Trintellix inopinda mumukaka wemukaka kana kukanganisa mwana anoyamwa. Iyo Dhiragi uye Lactation Dhatabhesi (National Raibhurari yeMishonga) kundichakuwona gare gare vanaamai vari kutora Trintellix kuchinjira kumimwe mishonga vasati vayamwisa mwana. Imwe nzira kutsvaga imwe nzira yekudyisa mucheche.
Trintellix ine kudyidzana kwezvinodhaka uko kunogona kukonzera akasiyana mhedzisiro.
Trintellix uye MAO inhibitors
Trintellix haifanire kutorwa ne monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). Kubatanidza Trintellix ne MAO inhibitor kunogona kukonzera serotonin syndrome. Iyi mishonga inosanganisira:
Nardil (COM) phenelzine )
Methylene bhuruu jekiseni
Trintellix uye serotonergic zvinodhaka
Zvinodhaka zvinokwidziridza mazinga eserotonin anonzi serotonergic zvinodhaka. Mimwe yemishonga iyi ine simba guru pane serotonin, nepo vamwe vasina. Njodzi yeserotonin syndrome yakanyanya kuderera asi inowedzera kana maviri kana anopfuura madhiragi eserotonergic akatorwa pamwechete. Neichi chikonzero, kubatanidza mimwe serotonergic zvinodhaka naTrintellix inofanirwa kudzivirirwa. Izvi zvinosanganisira:
Zvinodzvinyirira zvakaita se
SSRIs (inosarudza serotonin reuptake inhibitors), senge citalopram, paroxetine, sertraline, kana fluoxetine
SNRIs (inosarudza serotonin uye norepinephrine reuptake inhibitors), senge duloxetine kana venlafaxine
Kunetseka mishonga senge buspirone
Zvinodhaka zvinorapa kana kudzivirira kusvotwa
Kosora mishonga iine dextromethorphan
Migraine mishonga kusanganisira triptans uye ergot zvinodhaka
Opioid senge tramadol kana fentanyl
Anticonvulsants senge carbamazepine kana phenytoin
Mishonga inowedzera dzakadai saSt. John's wort, tryptophan, kana Yohimbe
Trintellix uye ropa rakatetepa (anticoagulants)
Trintellix inomutsa njodzi yematambudziko ekubuda ropa, saka kurapwa kuchada kuongororwa kana munhu achitorawo-vanocheka ropa, senge warfarin kana Plavix (clopidogrel). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), senge aspirin uye ibuprofen, zvakare inopindira nekugwamba kweropa, saka inofanirwa kushandiswa zvishoma pakutora Trintellix. Mimwe anticancer zvinodhaka zvakare zvinomutsa njodzi yekubuda ropa zvikamu kana zvatorwa naTrintellix. Chekupedzisira, steroids inogona kukonzera kubuda kwemudumbu. Ngozi yematambudziko ekubuda ropa inowedzera kana mishonga iyi ikatorwa neTrintellix.
Vanhu vazhinji havazive kuti zvimwe zvinozivikanwa zvekudya uye zvemakwenzi zvinowedzera zvinokanganisa kuvhara ropa, saka izvi, zvakare, zvinofanirwa kushandiswa zvishoma pakutora Trintellix. Zvinosanganisira:
marapirwo echirume mbiriso hutachiona kumba
Trintellix uye diuretics
Trintellix inomutsa njodzi yemazinga epasi e-sodium muropa. Diuretiki (mapiritsi emvura) anogona kubatsira kuchinetso nekuwedzera kubuda kwesodium. Therapy ine diuretics ingangoda kuongororwa kana kuchinjwa. Sulfonylurea zvinodhaka, zvakatemerwa kudzora shuga yeropa mune varwere vane mhando 2 chirwere cheshuga, vachadaro zvakare kuwedzera njodzi yesodiyamu yakaderera muvanhu vanotora Trintellix.
Mishonga inoderedza kushanda kweTrintellix
Mimwe mishonga inomhanyisa metabolism yemuviri wevortioxetine, ichideredza kushanda kwayo. Izvi zvinosanganisira:
Iyo mishonga inorwisa mabhakitiriya rifampin, rifapentine, rifamycin, rifaximin, uye rifabutin
Dzimwe mhando dze anticonvulsant zvinodhaka
Dzimwe mhando dze antiviral zvinodhaka
Barbiturates dzakadai sebutalbital uye butabarbital
Paunenge uchitora iyi mishonga, iyo Trintellix dose inogona kuda kuwedzerwa.
Zvinodhaka zvinowedzera mhedzisiro yeTrintellix
Mimwe mishonga inoderedza metabolism yemuviri wevortioxetine, ichiwedzera kuitika uye kuomarara kwemhedzisiro inogona kuitika. Izvi zvinosanganisira:
Vamwe mishonga inodzvinyirira saWellbutrin (bupropion), Paxil (paroxetine), kana Prozac (fluoxetine)
Mimwe mishonga inobata isina kujairika kurova kwemoyo zvakadai sequinidine
Mubatsiri wezvehutano angangoda kudzikisa iyo Trintellix dose neinosvika hafu kana yatorwa nemishonga iyi.
Trintellix uye doro
Iko hakuna humbowo kunwa doro kunokonzeresa kukanganisika paunenge uchitora vortioxetine. Mugadziri, zvakadaro, anopa zano vanhu kuti vadzivise kunwa doro vachitora Trintellix.
Maitiro ekudzivirira Trintellix mhedzisiro
Haasi munhu wese anotora Trintellix anozove nemhedzisiro. Kune avo vanoita, mhedzisiro inowanzo kuve shoma. Kune, zvisinei, kune mashoma nzira dzekudzora njodzi yemhedzisiro:
1. Tora Trintellix sekurairwa
Tora dosi yakatemwa, kazhinji 5 kusvika 20 mg kamwe pazuva. Usatore mishonga yekuwedzera, cheka muyero, kana kusvetuka zuva kana maviri. Trintellix inogona kutorwa nekudya kana pane isina chinhu mudumbu.
2. Usarega kutora Trintellix pakarepo
Dzivisa kumisa Trintellix zvese kamwechete. Panogona kunge paine mhedzisiro. Kana mushonga wacho uchiratidzika kunge usiri kushanda kana mhedzisiro yakaoma kutora, taura nachiremba anorayira, wemishonga, kana mumwe nyanzvi yehutano nezve kushandura dhizaini kana kuchinjira kumushonga mutsva. Kana zvichibvumiranwa mushonga unofanirwa kumiswa, nzira yakanakisa ndeyekudzikamisa muyero zvinoenderana nemirayiridzo yemupi wezvehutano.
3. Usapotsa madhiri
Kufanana neanodzvinyirira ese, vanhu vanowana zvishoma kubatsirwa kubva kumushonga kana vakapotsa madosi. Kana akawandisa madosi akashayikwa mumutsara, zviratidzo zvechimiro chiri kurapwa zvinogona kudzoka. Izvo zvinobatsira kuchengeta diary yemushonga, kushandisa chirongwa chekurapa, kumisikidza bhokisi remapiritsi remazuva manomwe, kana kuseta alarm yezuva rega rega.
4. Udza chiremba nezvehutano hwese
Kugovera yakazara nhoroondo yezvokurapa kunogona kubatsira kudzivirira mhedzisiro. Usati watanga Trintellix, udza chiremba wako kana iwe uine chero cheanotevera:
Chero matambudziko ane yakaderera sodium
Chero matambudziko nekubuda ropa
Mania kana bipolar kusagadzikana
Uyezve ita shuwa kuti iwe unotaurira chiremba nezve nhumbu, kuyamwisa, kana chero hurongwa hwekuita nhumbu kana kuyamwisa mwana.
5. Udza chiremba nezvemishonga yose iri kutorwa
Trintellix ine akawanda akashata mhedzisiro nekuda kwekubatana kwezvinodhaka. Udza chiremba anorondedzera nezve zvese iyo mishonga uye zvinowedzera zvaunotora, kunyanya:
Mishonga inobata manzwiro, kushushikana, psychosis, kana zvimwe zvinetso zvepfungwa
Mishonga inorwadza yakadai seopioid kana NSAIDs
Yese-pamushonga mishonga, zvinowedzera, uye mishonga yemakwenzi yaunotora, kunyanya St. John's wort uye tryptophan
Kana iwe usina chokwadi nezve mushonga, chiremba, wemishonga, kana mumwe mupi wezvehutano anogona kukubatsira kuti uzive. Kana iwe uri kutora maviri kana anopfuura emishonga ekurapa, chengeta rondedzero yeiyi ese mishonga iri paruoko. Iva wakagadzirira kubvunza rondedzero iyi kana uchitaura nachiremba wezvehutano.
Antidepressant discontinuation chirwere , Chiremba wemhuri yeAmerica
Trintellix , Epocrates
Trintellix Mishonga Inotungamira , Takeda Mishonga
Vortioxetine , StatPearls
Vortioxetine (Trintellix ), National Alliance yeMental Chirwere (NAMI)
Anodzvinyirira mashandisirwo uye chiitiko chehuremu mukati memakore gumi 'ekutevera; huwandu hwevanhu hwakavakirwa cohort kudzidza , BMJ
Zvinodzvinyirira zvinokonzeresa kuwedzera huremu , Harvard Hutano
Kushungurudzika , StatPearls
Zvinodhaka-zvinokonzerwa neserotonin syndrome , LOUSE. Pharmacist
Major Kushungurudzika Dambudziko , StatPearls
Makona mapfupi anodzora-kubva kune njodzi yekuona , Harvard Hutano
Vortioxetine , Lactation uye Dhatabhesi Dhatabhesi
Vortioxetine chidimbu chidimbu , Raibhurari Yenyika yeMishonga
Kurera huremu uye mishonga yekudzvinyirira , Zvinyorwa zveKiriniki Psychiatry
Diuretics: Zvishandiso, zvakajairika zvigadzirwa, uye ruzivo rwekuchengetedza
yakakwira sei glucose mazinga echirwere cheshuga
mukomana angabvisa sei hutachiona hwembiriso
unoshandisa sei epipen?
tembiricha ipi inorondedzerwa sefivha
mishonga ipi inobatsira kudzora kusvotwa uye kurutsa